Misy fitaovana fikarohana bakalorea hijerena ny mpifaninana amiko?
Tsy ilaina ny milaza fa efa zava-dehibe foana ny fahalalana. Fa amin'izao fotoana izao, ny fahazoana tsara ny fahaiza-manaon'ny fifaninanana dia mety ho lasa fitaovam-piadiana lehibe indrindra hitarika ny fitarihana ary ara-bakiteny manapaka ny tsenan'ny tsena amin'ny orinasa. Ary eny, misy fitaovana fikarohana bakalorea maromaro ahafahana mijery io fomba fijery manan-danja io ho an'ny valin'ny tetikasanao an-tserasera.
Eto ambany eto dia hanome anao sary feno momba ny fifaninanana fifaninanana aho. Ankoatra ireo fitaovana fikarohana momba ny backlink ihany koa, dia efa nampiasa mpikaroka an-tserasera hafa aho mba hitsikilo ny lafiny rehetra amin'ny fampisehoana amin'ny Internet. Aza misalasala mandray soa avy amin'ny vahaolana mety indrindra sy ny tetik'asa mahomby indrindra ampiasain'ny mpifaninana akaiky indrindra anao. Andao hojerentsika ny teny fototra tsara indrindra, ny fifamoivoizana, ny media sosialy ary ny fitaovana fikarohana momba ny fikarohana an-dalamby mba hijanona ivelan'ny fifaninanana ary hitarika ny mpanohitra ny mpanohitra anao.
Meny fitetezana Fitaovana manokana Hamorona kaonty Hiditra Valam-pejy Lahatsoratra dinika Ny '' skin '' Voasintona Fijerena Hamaky Hanova. Rehefa mameno io teny fototra io dia hampiseho anao ny olona rehetra izay efa nitazona azy hatramin'izao ny SpyFu. Ary ianao dia afaka maimaim-po foana hampiasa io fomba fijery manan-danja io amin'ny zava-baovao rehetra nataon'ireo mpifaninana aminao tamin'ny alàlan'ny tantara naharitra 10 taona, ny fomba nanatsarany ny vondron'ireo teny fototra vondron'izy ireo, ary ny fomba nitantanany (na tsy nahavita) hampitombo ny fivoaran'izy ireo. Azonao atao koa ny mampiditra ny anaran'ny tranonkalanao manokana mba hahazoana soso-kevitra haingana amin'ny lisitry ny teny fanalahidy ambony omena amin'ny orinasa.
Anisan'ny fitaovana fikarohana miendrika bakalorea aho, nahita Moz Pro sy Semalt Analyzer ho toy ny top. Izy ireo dia hita fa tsara ho an'ny famolavolana ny fomba tokony ahafahako manangana backlinks amin'ny tranokalako. Amin'ny ankapobeny, nampiasa ny fitaovana fikarohana momba ny fikarohana momba ny fikarohana aho, fantatra amin'ny anarana Open Site Explorer sy Analyzer. Amin'izany fomba izany, afaka niditra ny tranokalan'ny tranokala na ny mpifaninana rehetra aho mba hijerena ny mombamomba ny rohim-pifandraisana iray - firy ny rohy ary avy amin'ny sehatra inona avy, inona ny vatofantsika sy ny toerana misy azy. Raha manao izany aho, dia tsy nahagaga ahy fotsiny - tamin'ny fampiasana fitaovana roa dia tena nanampy tokoa ny hamantatra ireo tanjona tsara indrindra ho an'ny fanararaotako.
Raha jerena ny fifamoivoizana, mino aho fa toy ny Internet ny fitaovana tsara indrindra eto an-toerana. Tena nanampy ahy hahafantatra tsara ny tetik'ady ara-barotra mahomby indrindra amin'ny mpifanandrina akaiky amiko izany. Nalaina tamin'ny ankapobeny, toy ny tranonkala mitovy aminao afaka mampiseho anao ny data trafikan'ireo mpifaninana aminao: ny isa ny mpitsidika, ny antsipirihany amin'ny antsipiriany momba ny faharetan'ny fitsidihana, ny mari-pijery amin'ny takila, ny tifitra, ny fizotran'ny fifamoivoizana, ary ny tena izy.
Aza misalasala manandrana ny Buzz Sumo amin'ny fitsikilovana ny mpifaninana aminao eo amin'ny sehatry ny media sosialy. Ity fitaovana fikarohana fifaninanana ity dia manana lafiny matanjaka maro, ankoatra ny fihainoana fotsiny ny resadresaka nifanaovanareo. Azo ampiasaina amin'ny fomba fijery lalindalina kokoa amin'ny votoaty be mpampiasa indrindra izy io, indrindra ny lahatsoratra izay nahazo ny làlana tena izy, mamantatra ireo mpitsikilo mahery indrindra ao amin'ny media sosialy, ary koa ireo ampahany betsaka indrindra amin'ny votoatiny, ireo lohahevitra sy ny famoahana fandaharam-potoana. Ankoatra izany, ny fitaovana dia hita fa tena tsara ho an'ny fanadihadiana amin'ny lafiny hafa mba hahatonga ny fahasamihafana mazava amin'ny fandrosoako manokana Source .